वर्षाका कारण बस्ती डुवानमा - Pradesh Dainik
वर्षाका कारण बस्ती डुवानमा
बुधबार, असार २५, २०७६ , प्रदेश दैनिक
पथरी, निरन्तरको वर्षाका करण तराइका बस्तीहरु डुवानमा पर्न थालेका छन् । मोरङको पथरीशनिश्चरे ५ हसन्दहका अधिकांश घरहरु वर्षातको समयमा डुवानमा पर्ने गरेका छन् ।
३ दिन देखिको वर्षाले अहिले वडा नं. ५ का सुँगा, हसन्दह, मैनखाडी, बालुवाटार लगाएतका क्षेत्रमा प्रसस्त मात्रामा पानी जमेको छ । हिजो नै केही घरहरु डुवेको वडा अध्यक्ष जोग बहादुर धिमालले जानकारी दिए । धिमालका अनुसार पानीले विस्थापित नै हुने अवस्था नआएता पनि घरहरुमा पानी जमेको छ । दैनिक कामहरु गर्नका लागि कठिन अवस्था छ । वडामा रहेका विद्यालयहरुमा पनि पानी जमेको छ । विहानै देखि वडाका जनप्रतिनिधिहरु अवलोकन गर्नका लागि वडामा घुम्ने काम भइरहेको जनाए ।
यो वडा नगरकै सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको वडा हो । वर्षेनी बक्राहा खोलाको वाढीले यहाँका बासिन्दालाई उठिबास लगाउने गरेको छ । धिमालले भने “नगरले पनि यो विषयमा गम्भीर हुनु पर्ने हो । बजेट बाँडफाँड गर्दा पनि सबै वडालाई बराबर विनियोजन भयो । हाम्रो वडा नगरमा सबैभन्दा जोखिममा छ । अब यस्तै हो भने पथरीबाट सबैले भुजा, चिउरा बोकेर आउने बेला हुन्छ ।”
पानीको मात्रा झन वढ्दै गएकाले सबैले सचेत रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल सम्म परको पानी मात्रै जमेको र बक्राहाको पानी बस्ती पस्ने अवस्था नरहेको वडा सदस्य उमेश बस्नेतले जानकारी दिए । “वडामा अहिले सम्म क्षति भएको सूचना आएको छैन्, तर पानी झन बढ्दैछ, अहिले सम्म खोलाको पानी पनि बस्ती पसेको छैन् तर यस्तै पानी परिरहने हो भने अवस्था अझै विग्रिन सक्छ” बस्नेतले भने,
यस वडाको केही भाग बक्राहा खोला पारी रहेको छ । साविक हसन्दहको २ नं. वडा मौलिबारी भने बर्षतको समयमा वडा र नगरसंग सम्पर्क विहिन हुने गरेको छ । बक्राहामा पानीको मात्रा बढेसंगै मौलिबारीका बासिन्दाले वडाको काम गर्नका लागि २२ कि.मि टाडाबाट घुमेर आउनुपर्ने छ । मौलिबारी विद्यार्थीहरुको आधारभूत तहको शिक्षण संस्था जनता आधारभूत विद्यालय सुन्दरी चोक हो । पानीको मात्रा नघटुन्जेल मौलिबारीबाट जनतामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीहरुको पनि शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ ।